Dad Shacab ah oo xalay Dil iyo Dhaawac loogu geystay Gobolka Hiiraan | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dad Shacab ah oo xalay Dil iyo Dhaawac loogu geystay Gobolka Hiiraan
Dad Shacab ah oo xalay Dil iyo Dhaawac loogu geystay Gobolka Hiiraan
Hiiraan(SONNA) Wararka ka imaanaya Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in habeenkii xalay deegaan ka tirsan Gobolkaasi lagu dilay Dad shacab ah kuwo kalena lagu dhaawacay.
Ilaa 2 qof oo shacab ah ayaa xalay fal dil ah loogu geystay deegaanka Gafiir oo hoostaga degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraan,iyadoo sidoo kale halkaasi lagu dhaawacay ilaa 3 qof oo kale,kuwaasi oo dhamaantoodi ahaa dad shacab ah.
Wariyaheena Gobolka Hiiraan C/shakuur Cusmaan Cali ayaa sheegay in falkani uu xalay saqdii dhexe ka dhacay deegaanka Gafiir oo khayaas ahaantii 10 KM dhanka Waqooyi kaga began tuulada Hees oo labadoodaba hoostaga Degmadaasi Maxaasi ee Gobolka Hiiraan,taasi oo walaac ku abuurtay dadka deegaanka.
Qaar kamid ah Shacabka iyo waxgaradka deegaanka ayaa ku baxay goobta dhacdadaasi ka dhacday,waxaana loo soo qaaday isbitalka guud ee magaalada Baladweyne si loo dabiibo dadkii halkaasi lagu dhaawacay.
Maamulka Gobolka iyo Saraakiisha ammaanka ayaan weli soo saarin wax war ah oo ku aadan dhacdadani dadka lagu dilay kuwa kalena lagu dhaawacay.
Previous articleDunida Islaamka oo walaacsan go’aanka Trump ee ku aadan aqoonsiga Qudus
Next articleWejigii 2-aad ee shirkii London oo Muqdisho ka furmaya